Sakafo Manerana Ny Tany Ao Amin’ny Blog Action Day 2011 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2011 3:43 GMT
Vakio amin'ny teny Svenska, Español, বাংলা, English
Isan-taona nanomboka tamin'ny 2007 dia mampiray ireo bilaogera manerana ny tany ny Blog Action Day amin'ny firesahana mikasika olana iray manokana eto amin'izao tontolo izao. Anaty fifanotronana dia mahazo mpanaraka an-tapitrisany ireo bilaogera mpandray anjara ireo. Ary tamin'ity taona ity, ny 16 Oktobra 2011, izy ireo dia niresaka momba ny sakafo. Jereo mivantana ato ny fanavaozana mikasika ny hoe iza avy no mampakatra lahatsoratra
Ny Blog Action Day dia nifanandrify indrindra tamin'ny Andro Manerantany Ho an'ny Sakafo, ka maro no nisafidy ny hiresaka momba ny fisondrotam-bidin'ny sakafo sy ny hanoanana manerana ny tany. Eto amin'ny Global Voices, Juliana Rincón dia nampakatra ireo video avy amin'olon-tsotra momba ny hanoanana any amin'ny firenen-tsamihafa any.
Mpanoratra maro hafa avy amin'ny Global Voices ihany koa no nandray anjara avy amin'ny alalan'ny bilaogin-dry zareo manokana.
Andrea Arzaba avy ao Meksika dia nisafidy ny hizara ao amin'ny bilaoginy One Lucky Life saripika avy amin'ny tsenan-tsakafo ao an-toerana tao Coyoacán, Mexico City — mampahatsiahy ireo mpamaky azy fa tamin'ny taona lasa dia ny nahandro Meksikana no nambaran'ny UNESCO ho “Raki-tsarobidin'ny Lovan-tsofina sy tsy fanova ananan'ny zanak'olombelona .
Tsenan-tsakafo ao Coyoacán, Mexico City avy amin'i Andrea Arzaba
Radifera Ranaivoson Maminirina avy amin'ny Global Voices Teny Malagasy dia nifidy ny hanoratra mikasika “sakafo iray mahagaga” avy ao Madagasikara izay jifaina manerana izao tontolo izao, eny fa na dia ny mpanamory sambondanitra eny an'habakabaka eny aza.
Nofidiako ny hiresaka mikasika vokatra Malagasy iray miavaka, voajanahary 100%, nefa tsy ambaka amin’izay vokarina amin’ny sehatra indostrian’ny fahasalamana sy ny farmasia any amin’ny tany lazaina ho mandroso sy efa lasa lavitra any.
Spirulina no anarany, ary zava-maniry anaty ranomasina fihinana izy io, ampiasaina ho famenon-tsakafo amin'ny endrika maro. Vakio bebe kokoa ny soa entin'ny Spirulina, amin'ny teny Malagasy na teny Anglisy (Isaorana i Candy tamin'ny fandikàna).
Ny mpanoratry ny Global Voices, Filip Stojanovski ao Makedonia dia nanara-maso manokana ireo bilaogy Makedoniana izay nisoratra anarana handray anjara tamin'ny Blog Action Day. Nizara ihany koa izy saripika ao amin'ny bilaoginy Razvigor 🙂 avy ao amin'ny tsenan-tsakafon'i Bunjakovec ao Skopje, Makedonia (jereo koa amin'ny teny Makedoniana).
Trondro amidy ao amin'ny tsenan-tsakafon'i Bunjakovec ao Skopje, Makedonia. sary avy amin'i Filip Stojanovski
Ny mpamoaka lahatsoratry ny Global Voices amin'ny teny Alemana, Katrin Zinoun, dia manoratra momba ny nitondran'ny sakafo ireo olona avy amin'ny kolontsaina samihafa hifanatona ao anatin'ny bilaoginy, dialogtexte.
… tsy dia maninona loatra. ny hoe ireo vahiny avy aminà finoana hafa mifampizara sakafo, na lafy politika samihafa, eny fa na dia ny mpifahavalo any an'ady aza. Zavatra tokana no iraisan'izy rehetra ireny: tsy maintsy misakafo. Ary mampifandray olona ny fiarahana misakafo.
Noho izany, ankafizo ny sakafonao! Raha azo atao dia miaraha aminà vahiny.
Nanoratra am- bilaogy momba ny sakafo koa va re ianao?
Miankina amin'ny faritr'ora misy anao, tsy mbola tara akory izao mba hanatevenan-daharana ny Blog Action Day amin'ny lahatsoratra avy any aminao manokana. Aza misalasala mizara ny rohinao any anaty fanehoan-kevitra any raha tianao ny mba hanopazanay maso aminy.
Ny Blog Action Day tamin'ity taona ity dia nokarakarain'ny The Voice Project izay mampifandray ireo bilaogera amin'ireo hetsika ara-politika mavesa-danja amin'ny alalan'ireo ONG mpiara-miombona antoka. Araho ny #BAD11 ao amin'ny Twitter!